पर्खूँ कि के गरूँ ?
editor — Tue, 10/17/2017 - 01:42
दिन ढल्दै गयो, साँझ पर्न लाग्यो फर्कूँ कि के गरूँ ?
आउँछ्यौ कि भन्ने आशामा अँझै पर्खूँ कि के गरूँ ?
दायाँ र बायाँ जाँ बस्छ्यौ त्यहीँ बस्ने ठाउँ खाली छ
जतन गरी राख्या छु दिल पस्ने ठाउँ खाली छ
मुखले बोल्न नमिल्ने मनको भाषा छ मसित
थाके नि नजर भेट्नलाई झिनो आशा छ मसित
editor — Tue, 10/17/2017 - 01:39
तिमी सुतेकै थियौ छोरी
म झिसमिसेमै हिडिहालें
तिम्रो कलिलो अनुहार
मलाई हेरिरहेको थियो छोरी
तर तिमी निदाइरहेकी थियौ
मैले तिम्रा दुवै गाला
सुमसुमाए र म्वाई खाएँ
तिम्रो मायालाई मुटुभरि बोकेर
पछ्यौरीले आँसु पुछ्दै हिडिहालें
editor — Tue, 10/17/2017 - 01:22
मेरो मुटुमा ठोकिएर, चिसिएर गएको
तिम्रो मुटुलाई छुनै सकेन
तिमी मुट्ठीमा विष लिएर हाँस्दै–नाच्दै
यत्रतत्र सर्वत्र छर्दै–छर्दै हिडिरहेका छौ
म हत्केलामा अमृत लिएर
तिमीले छरेको विषलाई निस्तेज पार्दै–पार्दै हिंडिरहेको छु ।
तिमी तिमी खोज्छु
narayan pokharel — Mon, 10/16/2017 - 14:50
हिजो हराएछौ तिमी आइनौ आश लिई बसें
आइनौ कल्पनामा भावनामा मुटु बिछ्याई बसें
मनभित्रका तरङ्का हर धारमा खोजें
मुटुका चलने तिम्रा हर चाल्मा खोजें
editor — Sun, 10/15/2017 - 17:35
आधा मीटर कोरा कपडाको लगौँटी लगाएर
जीवनका आधा वसन्त बिताउने
जन्मदा उसको बाउ मालिकको बाँधा थियो,
मुलुकमा छयालिस र बासठ्ठीका परिवर्तनहरू भए
तर उसको दिनचर्यामा कुनै परिवर्तन आएन
जमिनदारको चाम्रो छातीजस्तो
माटो उधिनिरह्यो – हरेक हिँउद
तर आफ्नो भविष्य वीजाङ्कुरण भएन
editor — Sun, 10/15/2017 - 17:34
कोही नेता आप झै पाकेका
कोही जोतेको गोरु झै थाकेका
कोही बिदेश भागेका
कोही राजनीतिबाट छेउ लागेका
तर देश चाहिं
यस्तै बुढा गोरुले पो हाँकेका ।
Biju Subedi — Sun, 10/15/2017 - 17:28
एकदिन शहरमा बस्ने दिपकको बिहे गाउँकी एउटी केटीसँग भयो । एकदिन ऊ श्रीमतीसहित पहिलोपटक दशैंमा टीका थाप्न सासू ससुराकहाँ गयो । ऊ शहरको कोलाहल, प्रदुषणदेखि वाक्कदिक्क भएकाले गाउँमा औधी रमाइरहेको थियो । उनकी श्रीमती भने ऊ दङ्ग परेको देखेर रमाइरहेकी थिइन् । उसलाई देख्ने वित्तिक्कै उसलाई ससुराले सोध्यो :– हजुरलाई गाउँ त साह्रै नियास्रो लाग्यो होला ? केही सुविधा भएको होइन यहाँ ज्वाईंसाहेब ।
सुवास “दीप” — Sun, 10/15/2017 - 17:01
“ए तुच्छ प्राणी, सरकारलाई देखेपछि झुकेर सलाम गर्नु पर्दैन?” सिंहले अघि हिँडिरहेको खरायोलाई हुँकाऱ्यो।
“क्षमा पाउँ महाराज, मैले हजुरलाई देखिनँ,” खरायोले क्षमा याचना गऱ्यो। मनमनै उसलाई सिंह देखी औधी रिस उठिरहेको थियो तर शक्तिको अगाडि उसको के लाग्नु। रिस जायज पनि थियो - अनाहकमा ऊ जस्ता हज्जारौँ खरायाहरू त्यो क्रुर सिंहको भोजन बनिसकेका थिए। उसलाई डर थियो कहीँ अर्को पालो उसको नहोस् त्यसैले ऊ हात जोडेर झुक्दै हलचल नगरीकन उभीइरह्यो। सिंह उसका पछि लागि हिँडने स्याल/व्वाँसाहरूको लावा लस्करका साथ अगाडि बढ्यो। अगाडि बढ्ने क्रममा स्यालहरूले खाउँला झैँ खरायोलाई हेर्दै गए। डरले खरायोको सातो पुत्लो उड्यो।
editor — Sat, 10/14/2017 - 16:46
"पातलीसँग बिहे गर्न पाए बल्ल मर्दको छोरा भनेर गर्दन फुलाउदै हिड्नु हुन्थ्यो ?" तामाङले चुरोट सल्काउँदै बार्दली छेउमै उभिएर बोल्यो ।
"तँ काठमाडौँमा छस्, उता गाउमा पातलीले तेरा लागि जोबन जोगाएर राखेकी होला त "? मैले पनि छेड हानें ।
प्रमोद प्याकुरेल — Sat, 10/14/2017 - 16:30
सुलेख साहित्यिक मासिक अङ्क ४०
जीवनको उत्तराद्र्घमा मलाई आफू एक्लो भएको र बाँच्नका लागि सामाजिक सुरक्षा आवश्यकता महसुस हुन थाल्यो । आफ्नो बिगतका कृयाकलाबहरूको एक पटक समिक्षा र गल्तीहरूका प्रायश्चित गर्नु आवश्यक ठाने मैले । महानास्तिकताबाट माथि उठेर ईश्वरको अस्तित्व नियाल्ने चाहना हुन थाल्यो । मृत्यु पछिको लोक खोज्ज मन लाग्यो । पुराना परम्परा, रीति, संस्कार आदि तोड्नु नै आनो जीवनको उदेश्य बनाएको म आज त्यही परम्परा जोगाउने प्रयास गर्दैछु ।
BhawaniKhatiwada — Sat, 10/14/2017 - 16:27
फक्रेको ढकमक्क मध्ये दिन यो तातो उगेल्दैछ कि !
भन्ने भाव बुझाउँदै छ ऊ स्वयं त्यो खेल खेल्दैछ कि !
आफैंभित्र अनन्त कष्टहरुमा आफैं पिरोल्दैछ कि !
मानौं मानव भाग्य वा नियतिको सन्त्रास झेल्दै छ कि !!
तातो होस् कि चिसो छ पूज्य जसमा मैले झुकाएँ शिर
मेरो धर्म थलो छ पूज्य जसमा मैले सिकें अक्षर
मैले गाउन सक्नुपर्दछ स्वयं यो देशकै शान हो
श्रद्धाभाव अनन्त राख्छु मुटुमा मेरो छ सम्मान यो ।।
editor — Sat, 10/14/2017 - 16:24
अथाह चाहना सपनाहरुको भीडहरुमा
समालिदै र समाल्दै
तातो हावा खाँदै मरुभूमिको मुटुमा तड्पेर
गैति र बेल्चाहरुले अलकत्रा बिछ्याउदै
अभावै अभावमा फाटेको जिन्दगीका टालाहरू
कति दिन सिलाउने हो ।
bheshraj71 — Fri, 10/13/2017 - 02:57
जलिरहेछ दिल धुवाँ नदेखिँदै
दुखिरहेछ कतै घाउ नभेटिँदै
रगत बगे बरु चोट देखिँदो हो
आँसु खसी झन् यो के भयो ?
बिर्सिदिए पनि आफै हराएझैँ
सम्झिदिए पनि दिलै जलाएझैँ
न बाँच्न सकियो न मर्न पाइयो
नदेखिने चोट कति खाइयो ।
नयाँ पार्टी गठनबारे प्रस्तावना
HomSuvedi — Fri, 10/13/2017 - 02:32
खुइलिएको तालु तथा श्रृङ्खला पत्रिका
भैरव अर्यालले खोलिदिएका नयाँ नयाँ पार्टीमा समेत भित्रिन नसकेपछि आजभोलि मैले पनि एउटा पार्टी नबनाई नहुने निधो गरेको छु । त्यो नयाँ पार्टीका बारेमा म केही गन्थनमन्थन गर्न लागिरहेको छु । कति जनाको केन्द्रे कमेटी, कति जनाको माधिवेसन प्रतिनीधि, कति जनाको पोलिटबुरो बनाउने जस्तासम्मका कुरा पनि म बबुरोलाई अहिले थाहा छैन । नाम कस्तो राख्ने, उद्देश्य के राख्ने, प्रियाम्बलमा के लेख्ने आदि कुरा ता तपसिलका भइगए । अहिले ता मेरो गन्थनमन्थन मात्र चल्दैछ । यो गन्थनमन्थनमा मेरा मात्र नभई अरुअरु पार्टीका कथाहरू पनि आउन सक्लान् । त्यसो भएपछि सुरुमै मैले पूर्वक्षमा ता मागिराख्नु पर्छ । पार्टीको नाम, प्रस्तावना, यसको कार्यदिशा आदिमा कुनै अन्य अर्थ लागिहालेछ भने त्यसका लागि क्षमा माग्दै कुरा अघि बढाउँछु ।
कौण्डिन्य गोत्रको प्रारम्भ द्वापर युगमा
आम्बा ब्लेला माम
तिम्रै मनको चल्छ ध्वनि !
पच्चीस वर्षो सँघारमा
उनलाई बाडुल्की नलागोस
सपनीमा कालो काग कराएको देखेँ
यसरी जन्मन्छन् डोबहरू
मन मिल्ने साथी चाहिँदो रैछ
चार हाइकु (के अर्थ छ र)
भोकै मरे बचेरा ती
आक्रान्त भो देश